လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သွက်ချာပါဒဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရန် သင်သိသင့်သော အချက် (၁၀) ချက် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဇူလိုင် 4, 2018 Kaseansom Viranuvatti, M.D.
သွေးပေါင်ချိန်များတဲ့လူတွေဟာ ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ရှိတဲ့လူတွေထက် နှစ်ဆကနေ ငါးဆအထိ Stroke လို့ ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောရုတ်တရက် ပေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။ သို့ပေမဲ့ တက်နေလေ့ရှိတဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်အနေအထားရောက်အောင် ညှိယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို ၃ဝရာခိုင်နှုန်းကနေ ၄ဝရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေရဲ့ ၈ဝရာခိုင်နှုန်းဟာ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါသည်။ Stroke Screening လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချလို့ရပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ လက်မောင်းတွေ ခြေထောက်တွေ ရုတ်တရက်အားနည်းလာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တခြမ်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ ကောင်းစွာစကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း၊ အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်၍ မျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်ရတော့ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးမမြင်ရတော့ခြင်း၊ ခေါင်းမူးနောက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်စည်းချက်ညီညီမတ်တတ်မရပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခေါင်းကိုက်ခြင်း။
ဤသို့သော ရောဂါလက္ခဏာများခံစားရပါလျှင် နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းမှ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများနှင့် ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းခံစားရသော ရောဂါဝေဒနာရှင်များဟာ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းရပြီး လေးနာရီခွဲအတွင်း ဆေးရုံသို့အချိန်မီရောက်၍ ကုသခြင်းအချိန်မီခံယူနိုင်ခဲ့လျှင်လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းမရခင်ခံစားရသော ဝေဒနာများမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန် စေနိုင်သော အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ အချိန်မီကုသမှုခံယူနိုင်သူများသည် ကုသမှုမခံယူနိုင်သူများနှင့်ယှဉ်လျှင်အသေးအဖွဲ သာမာန် ပြသနာများလောက်သာ ကျန်ရှိခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဦးနှောက်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီဟာ ဆန့်ကျင်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်အခြမ်းကို တာဝန်ယူရပါသည်။ ဦးနှောက်သည် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှစ ခြေချောင်းလေးများထိ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ဦးနှောက်သွေးကြောလေးများကလည်း နှစ်ပိုင်းခွဲထားလေ့ရှိပါသည်။ ဦးနှောက်တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ သွေးယိုသွေးထွက်ခြင်းဖြစ်နေသော်လည်း တခြားတစ်ဖက်ခြမ်းကတော့ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေလေ့ရှိတာပါပဲ။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခြမ်းကသာ ရောဂါဝေဒနာခံစားရလေ့ရှိပါသည်။
(၁) လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ရနိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ?
လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းရနိုင်ခြေဟာ လူတိုင်းမှာရှိပါသည်။ အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်သူများမှာတော့ ပို၍ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်လေ့ရှိသူများ၊ အရက်သောက်လေ့ရှိသူများ၊ သွေးပေါင်ချိန်များလေ့ရှိသူများ၊ သွေးတွင်းအဆီပမာဏများသူများ၊ အဝလွန်သူများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်မလုပ်သူများ၊ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များ၊ ခြေလက်အင်္ဂါသွေးလွှတ်ကြောဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုခုခံစားနေရသူများ၊ နှလုံးခုန်သံပုံမှန်မဟုတ်သူများ၊ မိသားစုထဲတွင် နှလုံးသွေးကြောနှင့်ဆိုင်သောရောဂါဖြစ်ဖူးသူရှိသူများဟာ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ရနိုင်ခြေရှိပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ လက်မောင်းတွေ ခြေထောက်တွေ ရုတ်တရက်အားနည်းလာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တခြမ်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ ကောင်းစွာစကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း၊ အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်၍ မျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်ရတော့ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်လုံးနှစ်ဖက် လုံးမမြင်ရတော့ခြင်း၊ ခေါင်းမူးနောက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်စည်းချက်ညီညီမတ်တတ်မရပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခေါင်းကိုက်ခြင်း။
(၃) သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်ခြင်းဟာ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းရနိုင်ခြေမြင့်ပါသည်။
သို့သော် ထိုအခြေအနေသည် ပုံမှန်အနေအထားရအောင် ပြန်လည်ထိန်းနိုင်ပါသည်။သွေးပေါင်ချိန်များတဲ့လူတွေဟာ ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ရှိတဲ့လူတွေထက် နှစ်ဆကနေ ငါးဆအထိ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း လို့ ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောရုတ်တရက် ပေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။ သို့ပေမဲ့ တက်နေလေ့ ရှိတဲ့သွေးပေါင်ချိန် ကို ပုံမှန်အနေအထားရောက်အောင် ညှိယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို ၃ဝရာခိုင်နှုန်းကနေ ၄ဝရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ သွေးပေါင်ချိန်ပုံမှန်အနေအထားရောက်အောင် အစားအစာကို အတိုင်းအချင့်နှင့်စားခြင်း၊ အဆီနှင့်ဆားများသောအစားအစာများကိုလျှော့စားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျစေသောဆေးဝါးများကို မှီဝဲခြင်းနှင့် ဆရာဝန်ရက်ချိန်းပုံမှန်သွားပြခြင်းများဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်ခြင်းမဖြစ်စေရန် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
(၄) အသက်ကြီးသူတွေ မူးလဲကျတာဟာ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသလား?
အသက်ကြီးသူတွေမူးလဲကျတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဟာ မြေပြင်နဲ့ရိုက်မိခြင်း သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုနှင့်ရိုက်မိခြင်းတို့ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ရိုက်မိခြင်းသည် ဦးခေါင်းခွံကွဲအက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပြီး ဦးခေါင်းခွံအတွင်း သွေးယိုစိမ့်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သူတို့ဘာသာလဲကျခြင်းမျိုးဟာ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းသွက်ချာပါဒဖြစ်ခြင်းမျိုးတွေကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
(၅) လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ရပြီးနောက် သွက်ချာပါဒ အမြဲဖြစ်စေတတ်ပါသလား?
တချို့သော လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းရသူတွေဟာ လေဖြတ်ခြင်းကိုခဏတာတော့ ခံစားရတတ်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ပြန်ပြီးနာလန်ထူအဆင်ပြေလာတတ်ပါသည်။ဒီလိုလေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ရခြင်းကို Transient Ischemic Attack (TIA) လို့သုံးနှုန်းကြပါသည်။TIA လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းရတဲ့လူတွေဟာ ဆေးကုသမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပုံမှန် သို့မဟုတ် ပုံမှန်နီးပါးပြန်ကောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းရလျှင် ရပြီးခြင်း အချိန်မီကုသနိုင်လျှင်တော့ ပိုပြီးအခွင့်အရေးများပါသည်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့နာလန်ထူအောင်ပြန်ကုသခြင်းသည် လူနာ၏ဦးနှောက်အခြေအနေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတို့အပေါ်တွင် ရာနှုန်းပြည့်မူတည်နေသည်။
(၆) နှလုံးသွေးကြောနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများဖြစ်ပွားမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း
လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေရဲ့ ၈ဝရာခိုင်နှုန်းဟာ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါသည်။ Stroke Screening လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချလို့ရပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအချက်အလက်များအပြင် Stroke ရဲ့အခြေအနေကို Magnetic resonance Angiography(MRA) scan ဖတ်ခြင်း၊ Transcranial Doppler ultrasound scan ဖတ်ခြင်း၊ Carotid duplex ultrasounds နှင့် နှလုံး၏ တာဝန်ယူမှုကို Enchocardiography ခေါ် ECG ဆွဲခြင်းဖြင့် အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။
(၇) ကုသမှုမြန်မြန်လုပ်နိုင်လေလေ ပုံမှန်အနေအထားပြန်ရောက်ဖို့ အခွင့်အရေးများလေလေ
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ခံစားရသော ရောဂါဝေဒနာရှင်များဟာ (လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း) လေးနာရီခွဲအတွင်း ဆေးရုံသို့အချိန်မီရောက်၍ ကုသခြင်းအချိန်မီခံယူနိုင်ခဲ့လျှင် (လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း) မရခင်ခံစားရသော ဝေဒနာများမှ ၃ဝရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင် သောအခွင့်အရေးရှိပါသည်။ အချိန်မီကုသမှုခံယူနိုင်သူများသည် ကုသမှုမခံယူနိုင်သူများနှင့်ယှဉ်လျှင် အဆိုးဝါးဆုံးအနေနှင့် အရေးမပါလှသောအသေးအဖွဲမသန်စွမ်းခြင်းများကိုသာ ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။
(၈) လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းရပြီးနောက် ဆေးရုံမှာအချိန် ဘယ်လောက်ကြာကြာကုသမှုခံယူသင့်ပါသလဲ?
ဆေးရုံတက်ရန်ကြာချိန်ဟာ လူနာရဲ့ ဝေဒနာပြင်းထန်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပါသည်။ စကားပြောအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း ခြေလက်များမလှုပ်ချင်မသယ်ချင်ဖြစ်ခြင်းစသော အရမ်းမပြင်းထန်သောဝေဒနာခံစားနေရသူများဟာ ဆေးရုံတွင် ၃ရက်မှ ၇ရက်အတွင်းသာ ကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ခြေလက်မသယ်နိုင်တော့ခြင်းနှင့် ရောဂါကြောင့်အိပ်ရာမှမထနိုင်တော့ခြင်းစသော ပြင်းထန်သော ဝေဒနာခံစားနေရသူများသည် ၇ရက်နှင့်အထက် ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ပြင်းထန်သော ရောဂါလက္ခဏာများခံစားနေရသူများသည် ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းနှင့်ပင် နမိုးနီးယား၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ bed sores ခေါ်အရေပြားပေါ်တွင် အနာဖြစ်ခြင်းများနှင့် ခြေထောက်တွင် thrombosis (သွေးခဲခြင်း) စသော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ခံစားရတတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့အခြေအနေများကြောင့်ပင် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း အတွက်ဆေးရုံတက်ရခြင်းရက်များပိုမိုရှည်ကြာစေတတ်ပါသည်။
(၉) ဝေဒနာရှင်များဆေးရုံမှမဆင်းခင် ဖေးမပေးခြင်း
လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းသူများသည် သူတစ်ပါးအပေါ်မှိခိုရခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခြမ်းလှုပ်ရှားမှုမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် အရာဝတ္ထုများအား ကိုင်တွယ်ခြင်း ကောက်ယူခြင်းစသော ကိစ္စရပ်များနှင့် အခြားတော့လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးအလွယ်တကူမလုပ်နိုင်ခြင်းစသော ပြဿနာများနှင့် တွေ့ဆုံရတတ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပြင်းထန်သော လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းဝေဒနာခံစားထားရသူများသည် ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းပင် ပြန်လည်၍မှီခိုမှုကင်းရန်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ခြင်းစသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုများကို ခံယူရလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့သောကုထုံးများတွင် လမ်းလျှောက်ရန်အထောက်အကူပြုသောပစ္စည်းများ၊ ခြေထောက်ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားတက်စေသည့်စက်များ၊ လမ်းလျှောက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် တုတ်အမျိုးမျိုးစသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ ဆေးရုံမှမဆင်းခင် ဆရာဝန်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသရေးအသင်းသည် ဝေဒနာခံစားနေရသူ၏အသင့်ဖြစ်မှုအနေအထားကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အိမ်၌တွင်လည်း မှီခိုစရာမလိုဘဲ မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးနိုင်ရန် နည်းလမ်းများစွာကို လေ့ကျင့်ပေးပါသည်။ ဤအချင်းအရာများသည် နာလန်ထူလာစေရန်ဖေးမမှုများဖြစ်သည်သာမက အိမ်တွင်လည်း မလိုလားအပ်သောမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားစေမှုများကို လျှော့ချပေးပါသည်။
ဆေးရုံမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများနှင့် ဝေဒနာခံစားနေရသူအား အိမ်တွင်စောင့်ရှောက်ပေးမှုများသည် ဝေဒနာခံစားနေရသူအား နာလန်ပြန်ထူလာစေရန် အားပေးခြင်းများ၊ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်စေသောအလားအလာများကို လျှော့ချပေးခြင်း အကြောင်းခံများဖြစ်သည်။ စောင့်ရှောက်ပေးသူများသည် အစားအသောက်ချင့်ချိန်စားသုံးစေခြင်း၊ ဆေးကုသမှုခြင်းများ၌ ကူညီပေးရမည်။ ပို၍အရေးကြီးသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခြင်းနှင့် ဆရာဝန်ရက်ချိန်းမပျက်ကွက်စေရန်ကိုလည်း အထူးဂရုပြုကူညီပေးရမည်။
လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သွက်ချာပါဒဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရန် သင်သိသင့်သော အချက် (၁၀) ချက် ဦးနှောက်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီဟာ ဆန့်ကျင်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်အခြမ်းကို တာဝန်ယူရပါသည်။ ဦးနှောက်သည် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှစ ခြေချောင်းလေးများထိ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။